PHOTOS ။ စဉ်အတွင်းမိမိအလွန်းပွင့်လင်းရှပ်အင်္ကျီများကသစ္စာဖောက် Kendall Jenner - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "PHOTOS ။ Kendall Jenner ကာလအတွင်းကသူ့အရမ်းပွင့်လင်းရှပ်အင်္ကျီများကသစ္စာဖောက်
PHOTOS ။ Kendall Jenner ကာလအတွင်းကသူ့အရမ်းပွင့်လင်းရှပ်အင်္ကျီများကသစ္စာဖောက်
အဆိုပါ kickoff New York မှာဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ် သောကြာနေ့6စက်တင်ဘာလအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးစနေနေ့, 14 စက်တင်ဘာလသည်အထိကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်ဆယ်ရက်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနာမည်ကြီးတွေ အဆိုပါ Big Apple ကငျြးတှေ့ရနှင့်ကွင်းဆက်ဖက်ရှင်တစ်ခုလွန်မိပြီအရှိန်အဟုန်မှာပြသပါလိမ့်မယ်။ ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲများအကြား, Kendall Jenner အပြည့်အဝစျေးဝယ် network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အတွက်ပြောက်ခဲ့သည်, သူမ၏အစ်မ Kim Kardashian နှင့်အတူအင်္ဂါနေ့စက်တင်ဘာလ 10 ။
ညီအစ်မတွေအကြားကဒီ output ကိုများအတွက် 23 နှစ်ပေါင်း၏မိန်းမငယ် ရိုးရှင်းပြီးချွန်ထက်နှစ်ဦးစလုံးသည်ကိုကြည့်လောင်းခဲ့သည်။ Kendall Jenner အပေါ်အလောင်းအစားခဲ့သည် တစ်ပွင့်လင်းအနက်ရောင်ဝတ်စုံရှပ်အင်္ကျီနှင့် button ကိုအဘယ်သူသည်ကိုလည်းအနက်ရောင်ဘောင်းဘီဝတ်စုံကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးဘရာစီယာအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဆိုပါအကျပ်အတည်းကို Makingအဆိုပါစူပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ Big Apple က၏လမ်းများလမ်းလျှောက်ဖို့မကြောက်ရှိပါတယ် မြင်သာရဲခွငျးအားဖွငျ့.
ဒါပေမယ့်အခန်းထဲမှာကိုင်ပြီး Kendall Jenner ပိုမိုနှစ်သက်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသည် ဖိနပ်သူ၏ pair တစုံ။ ထိုအကြောင်းကြောင့်မော်ဒယ်ပြီးသားဒီအကဆြုံးအကြီးမားဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကတစ်ခုမွေးစားထားပါတယ်: ခုနစ်ဆယ်-မှုတ်သွင်းဘွတ်ဖိနပ်။ သူမ၏အလွန်မှောင်မိုက်ကိုကြည့်နိုးထဖို့, လှပသောအနက်ရောင်ဆံရှင်လောင်းခဲ့ လက်ရုံးအောက်တွင်ဝတ်ဆင်တဲ့သားရေအိတ်, စလှုံ့ဆော်မှုမတွေ့ရသေးတဲ့, နေကာမျက်မှန်တရံနှင့်ရွှေပုတီးတရံ။
Kendall Jenner 2019 10 စက်တင်ဘာလ 2019 အပေါ်နယူးယောက်ရှိ Fashion Week စဉ်အတွင်းသူမ၏အစ်မ Kim Kardashian နှင့်အတူစျေးဝယ်သွား၏
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မင်းသမီး Eugenie: ကလေးကြေညာချက်အံ့ဆဲဆဲ York က & # 039; New York မှာဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်များလွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက်?
ပြည်သူ့: တစ်ဒရာမာ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာမိသားစု Gilbert Bécaud: မီးပေါ်မှာမိမိသမီး၏အိမ်, မိသားစုကိုပြောတတ်
Ivanka Trump Coiffure Ka Naya Dunia Ki Tawajah Ka Markaz! - ဗွီဒီယို
Ouattara နှင့် Soros အကြားအိုင်ဗရီကို့စ်, ဖျန်ဖြေလာသောသေတ္တာစေသည် - JeuneAfrique.com
အခြေခံအဆောက်အအုံ: Aboubaker အိုမာ Hadi, ဂျီဘူတီနိုင်ငံအသွင်ပြောင်းသောသူ - JeuneAfrique.com
ဗေဒင်: မပျော်စုံတွဲဖြစ်ရည်ရွယ်သည်ဟု3ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာ - ကျန်းမာရေး PLUS MAG